News Collection: देशको कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत समलिंगी
देशको कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत समलिंगी
काठमाडौं, भदौ ४ । के हाम्रो देशमा समेत समलिंगीको संख्या त्यतिधेरै भइसक्यो? समलिंगीबारे अघि सारिएको पछिल्लो आँकडा हेर्ने हो भने अब त जो–कोहीले जो–कोहीमाथि पनि शंका गर्नुपर्ने भयो। तपाईंको घरमा हुर्केका भाइबहिनी, छोराछोरी छन् भने उनीहरूको दैनिक बानी व्यवहार पनि ख्याल गर्नुपर्ने भयो। किनकि सामाजिक संस्कार र लोकलाजका कारण धेरैले आफूलाई खोल्नै सकेका छैनन्।
यो प्रश्नले तपाईंलाई च्वास्स घोच्न सक्छ। तर, शनिबार चितवनको भरतपुरस्थित रेडकार्पेट होटलमा भेला भएका देशभरका समलिंगीले प्रशासनका स्थानीय अधिकारी, राजनीतिक दलका अगुवा, पत्रकार, नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई समेत साक्षी राखेर माओवादी, कांग्रेस र एमालेका तीन सभासद्लाई सुनाएअनुसार देशको कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत समलिंगी छन्।
जनगणनाको पछिल्लो आँकडालाई आधार मान्दा तीन करोड जनसंख्याको १० प्रतिशतले ३० लाख हुन आउँछ। के यतिधेरै मानिस समलिंगी होलान्? पत्याउन मुस्किल पर्छ। तर, समलिंगीको अगुवाइ गर्दै आएका सभासद् सुनीलबाबु पन्त मानिसको यौनिक व्यवहार खुल्न पाउने हो भने अनुमान गरेभन्दा धेरै समलिंगी भेटिने दाबी गर्छन्, 'धर्म–कानुनको लगाम, सामाजिक लोकलाजका कारणले मात्रै खुल्न नसकेका हुन्।' आफूले अध्ययन गर्दा संविधानसभाका कतिपय सभासद्को व्यवहारसमेत समलिंगी पाएको दाबी गर्ने उनी भन्छन्, 'बनिसकेको प्रतिष्ठा ध्वस्त होला भन्ने डरले उहाँहरू खुल्न सक्नुभएको छैन, त्यो बेग्लै कुरा हो।'
समलिंगी तथा तेस्रोलिंगीको संस्था नीलहीरा समाजले आफ्नो राष्ट्रिय भेलामा शनिबार चितवनमा प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार चार प्रकारका समलिंगी हुने गर्छन्– पुरुष भएर पुरुषप्रति आकर्षित हुने, महिला भएर पनि महिलाप्रति आकर्षित हुने, लिंग पहिचान नभएका र यौनतृप्तिका लागि जो भए पनि हुने। संस्थाले हाम्रो समाजमा चौथो वर्गका समलिंगी सबैभन्दा धेरै भएको निष्कर्ष निकालेको छ। लिंग पहिचान नभएकाहरूको संख्याचाहिँ कुल जनसंख्याको एक प्रतिशत भएको उसको विश्लेषण छ। यद्यपि, कतिपयले समलंैगिक आकर्षणलाई कुलतको रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा नियमित योग, ध्यान गर्ने हो भने यस्ता कुलतको सिकारबाट बच्न सकिन्छ। तर, समलिंगीका अगुवा पन्त यो कुरा स्विकार्न तयार छैनन्। आफू २० वर्षदेखि योगा गरिरहेको बताउने पन्तको भनाइमा 'समलैंगिक आकर्षण आनिबानीसँग सम्बन्धित कुरा होइन, ब्रेनको हाइपोथाल्मस भन्ने भागको करामत हो।'
नेकपा संयुक्तका सभासद पन्तका अनुसार लोकलाज, सामाजिक प्रतिष्ठा ध्वस्त होला भन्ने भय आदिका कारण आफू वा परिवारको समस्या लुकाउनुपर्ने बाध्यता भएकालाई बढी छटपटी हुने गर्छ। 'आन्तरिक समस्यालाई जसले बढी दबाउन खोज्छ, उही नाटकीय बिरोधमा उत्रन्छ।' उनी भन्छन्, 'उग्र विरोध गर्नेहरू खुल्न नसकेका समलिंगी हुन्।' यस्तो हुनुका पछाडि मनोवैज्ञानिक कारण भएको बताउने उनले तेस्रोलिंगीलाई पहिचान खुलेको नागरिकता दिन सरकारले आनाकानी गर्नुका पछाडिको समस्या पनि यही भएको बताए। 'सर्वोच्च अदालतले समेत पहिचान खुलेको नागरिकता दिनू भनेर फैसला गरिसकेपछिको विगत चार वर्षयताका गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलादेखि नारायणकाजी श्रेष्ठसम्मका सबैलाई पटकौँपटक भेट्यौँ। तर, पहिचान खुलेको नागरिकता दिनमा कोही पनि सकारात्मक हुनुभएन।' पन्तले भने, 'कि उहाँहरू आफैँमा त्यो समस्या छ कि उहाँहरूको परिवारमा त्यो समस्या छ। नत्र नागरिकता दिने जस्तो कुरामा उहाँहरू किन डराइराख्नु भा'छ ? राज्यलाई अतिरिक्त भार पर्ने होइन, उहाँहरूको खल्तीबाट जाने पनि होइन..' अधिकारमा पनि सबैभन्दा पहिलो पहुँच मनी र मसलवालाहरूको हुने गरेको अनुभव सँगालेका सभासद् पन्तका अनुसार अहिलेसम्ममा तीनजनाले मात्र पहिचान खुलेको नागरिकता पाएका छन्। 'विदेशीहरूले नागरिकता लिनमा कुनै छेकवार नहुने, नागरिकता त्यागेर बिदेसिएका एनआरएनहरूलाई घर–घरमै परिचयपत्र पुर्यागउने ब्यवस्था हुनुले पैसा नै सबैथोक हो रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ,' उनले गुनासो पोखे।
पूर्वगृहमन्त्रीहरूमध्ये केहीको व्यवहारसमेत समलिंगी पाएको जानकारी दिने पन्तले तिनको नाम भने खोल्न चाहेनन्। बरु आफू पुरुष समलिंगी भएको खुलासाचाहिँ गरे। 'मेरो पार्टनर हङकङमा जन्मिनु भएको ब्रिटिस नागरिक हो।' नौ वर्षदेखि आफूहरू यौनिक साझेदार भएको बताउने उनले भने, 'तीन वर्षदेखि हङकङमा बस्दै आउनुभएको उहाँ सरुवा भएर चाँडै नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ।' उनी वन तथा जीविकोपार्जनको विशेषज्ञ भएकोसमेत जानकारी दिए। चितवनमा भएको समलिंगीको राष्ट्रिय भेलामा अतिथि हुने सभासद्मा माओवादीका सुदर्शन बराल, कांग्रेसका लक्ष्मी परियार र एमालेका रवीन्द्र अधिकारी थिए। आइतबार ती समलिंगीले चितवनमै गाईजात्रा मनाए।